Ahoana ny fomba hanakanana ireo milina fikarohana amin'ny indexing WordPress | Martech Zone
Ahoana ny fomba hanakanana ireo milina fikarohana ao amin'ny WordPress Indexing
Sabotsy, Janoary 23, 2021 Alakamisy 24 martsa 2022 Douglas Karr
Toa ny tranokala faharoa misy antsika dia manana tranokala WordPress na bilaogy. Izahay dia manao fivoarana sy famolavolana fomba amam-panao amin'ny WordPress - ny zava-drehetra dia manomboka amin'ny fananganana plugins ho an'ny orinasa ka hatramin'ny famolavolana rindranasa horonan-tsary amin'ny alàlan'ny serivisy Amazon cloud. WordPress tsy vahaolana mety foana, fa somary malefaka ihany ary hainay tsara izany.
Imbetsaka izahay no manao tranokala hahafahan'ny mpanjifanay mijery mialoha sy manakiana ny asa alohan'ny hametrahantsika azy mivantana. Indraindray aza izahay manafatra ny atin'ny mpanjifa ankehitriny mba hahafahanay miasa amin'ny tranokala tena misy atiny mivantana. Tsy tianay ny hisavoritaka amin'ny Google momba ny tranokala inona no tena tranonkala, toy izany koa isika kivy ny motera fikarohana avy amin'ny fanoratana ny tranonkala amin'ny fampiasana teknika mahazatra.
Ahoana ny fomba hanakanana ny milina fikarohana ao amin'ny WordPress
Tadidio fa andian-tsoratra mety ho teny mahery loatra. Misy fomba hanakanana ny mpikaroka motera fikarohana tsy hiditra amin'ny tranokalanao… fa ny ataonay eto dia ny mangataka fotsiny azy ireo tsy hanisa ny tranokalan'ny valin'ny karoka.
Tsotra ny manao izany ao anatin'ny WordPress. Ao amin'ny Fikirana> Famakiana menio, azonao atao ny manamarina boaty fotsiny:
Ahoana ny fomba hanakanana ireo milina fikarohana amin'ny alàlan'ny Robots.txt
Ho fanampin'izany, raha manana fidirana amin'ny lahatahiry tranonkala root misy ny tranokalanao ianao dia afaka manao izany koa ovao ny robots.txt anao hametraka ny:
Mpampiasa-maso: * Tsy mahazo: /
Ny fanovana robots.txt dia tena mety amin'ny tranonkala rehetra. Averina indray, raha mampiasa WordPress ianao, ny Laharana Plugin SEO SEO ahafahanao manavao ny rakitra Robots.txt anao mivantana amin'ny alàlan'ny interface… izay somary mora kokoa noho ny manandrana manao FTP ao amin'ny tranokalanao ary manitsy ny fisian'ilay rakitra.
Raha mamorona rindranasa tsy vita ianao, mametraka rindrambaiko amina sehatra hafa na subdomain hafa, na manangana tranokala misy antony hafa - tsara ny manakana ny motera fikarohana tsy handrindra ny tranokalanao ary hitondra ireo mpampiasa motera fikarohana any amin'ny toerana tsy mety!
Tags: manakana ny bingmanakana duckduckgomanakana ny milina fikarohanaplugin matematika seo laharanarobots.txtWordPressfikirana famakiana wordpressfananganana wordpress